Quaint and Quirky Ime Ụlọ Cafe - Imewe Mmewe
Ime Ụlọ Cafe
Ime Ụlọ Cafe Ulo Quaint & Quirky Dessert House bụ oru ngo nke gosipụtara vibe nke oge a na-emetụ ihe okike na-egosipụta n'ụzọ ziri ezi usoro ọgwụgwọ dị ụtọ. Ndi otu a choro imeputa ebe puru iche, ha na-elele ulo nnunu ahu anya maka mmuo. Ebuputara uche ahu weputara ndu site na nza nke oche ndi puru iche dika ndi nejere uzo. Ọdịdị dị egwu na agba nke pọd ahụ niile na-enye aka ịmepụta echiche nke otu na-ejikọ ala na ala mezzanine ọbụlagodi na ha na-enye mmachi ahụ anya.
Aha oru ngo : Quaint and Quirky, Aha ndị na-emepụta ya : Chaos Design Studio, Aha onye ahịa : Bird Nest Secret.
Ime Ụlọ Cafe Chaos Design Studio Quaint and Quirky